Basa reEKG richave riripo muWatchOS 5.1.2 | Ndinobva mac
Apple yatove yakazivisa panguva yekuratidzwa kweiyo nyowani Apple Watch Series 4 kuti iyo electrocardiogram basa raizowanikwa mukupera kwegore rino. Pane ino chiitiko, kambani inoita kunge "yarasa" gwaro iro raizivikanwa neveMacRumors midhiya rave kuwana uye mairi zvinotsanangurwa kuti Basa reECG richawanikwa mune inotevera vhezheni yeWOSOS 5.1.2.
Mukushaikwa kweyemutemo kusimbiswa kubva kuApple yatisingatende kunosimbisa kana, isu tine yechitatu beta vhezheni yeiyi OS mumaoko evanogadzira uye saka iyo yekupedzisira vhezheni inotarisirwa kuburitswa mumavhiki mashoma. Hatisi kujekesa kuti mangani mabeta e beta achaburitswa pamberi peiyo yepamutemo vhezheni, asi isu hatitarisiri kuti kuchave nevazhinji vachifunga kuti Zvita yave kuda kubata uye kana pasina matambudziko chero erudzi urwu basa iri rinenge richishanda pamberi pekuguma yegore.
United States ichave yekutanga kugamuchira chinhu ichi chiri zvakare Inotemerwa kumhando nyowani dzeApple Watch, Series 4. Kunyangwe izvi, zvinoita sekunge neshanduko yakapusa yedunhu rechishandiso iri basa rinogona kushanda pasirese, sezvo iri basa rinoita kuti iyo hardware inotakurwa neApple Watch Series 4 uye saka zvingave zvine musoro kuti ive yakadaro. Iwo mamodheru apfuura eApple Watch akasiyiwa kunze kwebasa sezvo chiri chinhu chinosanganisirwa mukorona yedhijitari yeApple Watch Series 4.
Ngatitarisirei kuti kuburitswa kwatakaburitswa kubva paMacRumors webhusaiti ichokwadi chose uye munguva pfupi tichava neiyi vhezheni itsva yeWOSOS 5.1.2 inowanikwa kune vese vashandisi. Mumavhiki anotevera ne kuvhurwa kwema betas matsva evanogadzira anotevera Semanas tichaona kana izvi zvasimbiswa uyezve kuburitswa kweyekupedzisira vhezheni kuchazongoshayikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Basa reEKG richave riripo muWatchOS 5.1.2
Dzokera kuposita-pane yako Mac neSticky Notes
Unzip mafaira ako akaomeswa neRAR Extractor Expert